Kedu ihe ndị ahịa azụmahịa Ecommerce kwesịrị ịma banyere Shopify SEO | Martech Zone
Ihe Ndị Azụmaahịa Ecommerce Kwesịrị Knowma Banyere Shopify SEO
'Ve gbalịsiri ike rụọ ọrụ ebe nrụọrụ weebụ Shopify ebe ị nwere ike ree ngwaahịa ndị na-agwa ndị ahịa okwu. I wepụtara oge buru isiokwu ahụ, tinye akwụkwọ katalọgụ na nkọwa gị, wee wuo usoro ịzụ ahịa gị. Agbanyeghị, agbanyeghị ka saịtị gị si dị oke mma ma ọ bụ na ọ dị mfe ịnyagharịa, ọ bụrụ na ụlọ ahịa Shopify gị abụghị ihe nchọta ọchụchọ, ohere ị nwere iji dọta ndị na-ege gị ntị pere mpe.
Enweghị ụzọ gburugburu ya: ezigbo SEO na-ewetara ndị mmadụ ụlọ ahịa gị Shopify. Data chịkọtara site na MineWhat chọpụtara na 81% nke ndị na-azụ ahịa nyocha ngwaahịa tupu ha azụ ahịa. Ọ bụrụ na ụlọ ahịa gị apụtaghị na ọkwa dị elu, ị nwere ike ịhapụ ire ere - ọbụlagodi na ngwaahịa gị dị elu. SEO nwere ikike ma ọ bụ siphon ndị ahịa nwere ebumnuche ịzụta, ma ọ bụ wepụ ha.
Ihe Storelọ Ahịa Shopify Gị chọrọ
Storelọ ahịa Shopify ọ bụla chọrọ ezigbo ntọala maka SEO. A na-ewukwasị ntọala SEO ọ bụla na isiokwu dị mma. Na-enweghị nnukwu isiokwu nnyocha, ị gaghị elekwasị anya na ndị na-ege ntị kwesịrị ekwesị, na mgbe ị naghị elekwasị ndị na-ege ntị anya, ohere ị nwere ịdọrọ ndị mmadụ nwere ike ịzụta bụ obere. Ọzọkwa, mgbe ị maara banyere nyocha isiokwu gị, ị ga-enwe ike itinye ihe ọmụma ahụ n'akụkụ ndị ọzọ nke azụmahịa ahụ, dị ka ahịa ọdịnaya.
Bido nyocha isiokwu gị site na ịdepụta ndepụta nke isiokwu ịchọrọ na ọ dị mkpa maka azụmaahịa ahụ. Kpoo ya ebe a - ma ọ bụrụ na ịrere ụlọ ọrụ, nke a apụtaghị na ị kwesịrị ịdepụta mkpụrụ okwu okwu maka ọfịs na-eweta ọrụ nke ngwaahịa ị na-adịghị ere. Naanị n'ihi na ọ na-adọta ndị nwere mmasị na ngwa ọrụ ọfịs, apụtaghị na ha ga-enwe obi ụtọ ịga saịtị na-enweghị ngwaahịa ha nyochaburu na Google.
Iji isiokwu nnyocha ngwaọrụ iji nyere gị aka ịchịkọta ozi dị mkpa gbasara isiokwu gị nwere ike. Isiokwu nnyocha ngwá ọrụ na-agwa gị nke Keywords na-na elu ina, nke Keywords nwere kasị ala mpi, olu, na-eri kwa click data. Ga-enwe ike ịkọwa mkpụrụokwu ndị ndị asọmpi gị na-eji na ibe ha kachasị ewu ewu. Imirikiti ngwaọrụ nyocha isiokwu na-enye nsụgharị na-akwụ ụgwọ na akwụ ụgwọ, agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwale etu o si arụ ọrụ, ịnwere ike iji ya Google Keyword Planner Planner.
Mee Nkọwa Ngwaahịa Smart
Ozugbo ị nwere nghọta zuru oke banyere isiokwu ị chọrọ iji, ị nwere ike itinye ha na nkọwa ngwaahịa gị. Ọ dị mkpa ka ị zere nri nri nri na nkọwa gị. Google maara mgbe ọdịnaya na-ekwekọghị n'okike, ị ga-enwetakwa ntaramahụhụ maka ịmegharị ụdị njem a. Productsfọdụ ngwaahịa ị na-ere nwere ike iyi ihe nkowa nke onwe; dịka ọmụmaatụ, ụlọ ahịa na-eweta ọfịs gị nwere ike isiri ya ike ịkọwa ihe ndị dị ka staple na akwụkwọ. Ọ dabara nke ọma, ịnwere ike ịnwe obi ụtọ na nkọwa gị iji mee ka ihe dị ụtọ (wee tụọ onwe gị na usoro ahụ).
ThinkGeek mere nke a na otu paragraf nkọwa nke ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ nke na-amalite site na ahịrị: “You maara ihe dị njọ na ọkụ ọkụ mgbe niile? Ha nwere naanị agba abụọ: ọcha ma ọ bụ nke na-acha ọcha ka nke na-echetara anyị ezé nke onye na-a coffeeụ kọfị na-anụ ọkụ n'obi. Gịnị bụ ụdị tọọchị ahụ? ”
Gbaa Nyocha Site Na Ndị Ahịa
Mgbe ị na-akpọ ndị ahịa ịhapụ nyocha, ị na -emepụta ikpo okwu iji nyere aka bulie ogo gị. Otu Nyocha ZenDesk achọpụta na 90% nke ndị sonyere na-emetụta nyocha dị mma n'ịntanetị. Nnyocha ndị ọzọ egosila na nchọta ndị yiri ya: na nkezi, ọtụtụ ndị tụkwasịrị obi na ndị na-enyocha ntanetị dịka ha tụkwasịrị obi n'okwu ọnụ. Ọ dị mkpa na ọ bụghị naanị na nyocha ndị a na nyiwe nyocha, kama na ibe ngwaahịa gị. E nwere ọtụtụ ụzọ kwenye ndị ahịa iji nyochaa azụmahịa gị; tụlee nhọrọ gị, ma chọpụta usoro dabara adaba maka azụmahịa gị.
Inweta SEO Enyemaka
Ọ bụrụ na okwu niile gbasara SEO karịrị gị ike, tụlee ka gị na ụlọ ọrụ azụmaahịa ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-eduzi gị duzie gị n'ụzọ ziri ezi. Inwe ọkachamara n'akụkụ gị na-enye gị ohere ịmụtakwu banyere usoro dị n'azụ SEO, yana itinyekwu uche na ngwaahịa gị, na ịnye ezigbo ahụmịhe ndị ahịa.
Dabere na SEOInc, ihe SEO ụlọ ọrụ na-ahụ maka ndụmọdụ na San Diego, ụfọdụ ụlọ ọrụ na-echegbu onwe ha banyere ịrụ ọrụ na ụlọ ọrụ na-atụ ụjọ ịhapụ njikwa, mana nke a abụghị eziokwu - ọ bụrụhaala na gị na ụlọ ọrụ amaara aha.
Shopify abụrụla nhọrọ kacha elu maka ire n'ịntanetị. N'ihi mkpa dị mkpa nke ịkwọ ndị ahịa gaa na saịtị ndị nwere ike Shopify, Shopify SEO na-enwe ọganiihu ngwa ngwa n'afọ ndị na-adịbeghị anya ma na-atụ anya na ọ ga-aga n'ihu na-eto n'ike n'ike. SEOInc
Nwedịrị ike ịtụle ịrụ ọrụ na onye nweere onwe ya nwere ahụmahụ nke gosipụtara nkà na SEO na nnukwu pọtụfoliyo. Ihe obula ị kpebiri, buru n’uche na SEO bụ ihe ekwesiri ime nke ọma, belụsọ ma ị nwere ike itinye oge iji mụta ụzọ kachasị mma ma tinye ha n'ọrụ nke ọma, ọ bụ ego kachasị mma iji nyefee ikike ndị ahụ na ndị ọzọ.
Tags: azụmahịa eonnyocha nyochanjikarịcha ịzụ ahịaAnwachukwuụlọ ahịazụọ ahịa seoEchere
Sep 24, 2017 na 1:17 PM
Ezigbo saịtị! Hụ ọdịnaya gị n'anya!
Nov 22, 2017 na 1:21 PM
hụrụ ndu a n'anya. daalụ nke ukwuu maka ịkekọrịta